Ragoow kibirka waa lagu kufaaye, taana ha la ogaado | isbeddel
← Aan idhaahdee: Waa la kufsaday
المثقف… الصنم →
Ragoow kibirka waa lagu kufaaye, taana ha la ogaado
Waxay ahayd xilli casar-gaab ah oo wax walba sidii lagu yaqaannay u socdaan badhtamaha magaalada Hargeysa. Waxaan taagnaa garabka galbeed ee dhismaha Gargaar oo aan ku sugayey bas ii fogeeya xaggaa iyo Jigjiga yar. Galabtaa diyaar umaan ahayn cashar sidan u culus in aan nolosha ka barto, waayo daalkii shaqada iyo niyad-jab aanan garanayn meel uu ka yimi ayaa igu kuudaday. Nasiib wanaag se daalkaa iyo niyad-jabkaasi kagamaan wahsan u fiirsiga darsigan qaaliga ah.
Qorshe hore iyo kutub la laabay ayay ku qornayd inta galabtaa Hargeysa dhex lugaynaysa iyo inta gaadhi ku taxtaxaashaysaa. Intaa lugta lagu xukumay waxaa ka mid ahayd gabadh si wacan u shareeran oo maro madow ilaa wejiga jiq iskaga siisay. Waxay si deggen u lugaynaysaa baalka midig ee haadka bari ee waddada wadnaha. Hadday sidaa uun arrintu ahaan lahayn maan arkeen, waayo tobannaan kaleba sideeda ayay u lugaynayaan oo haddana sida hanfalayda kuu dhaafayaan adoon jin iyo insi garanayn wax ay ahaayeen. Wax igu soo jeediyay ayaa se jiray.
Isla baalkii midig ee bari ka imanayey waxa soo qaaday gaadhi dahabi Surf ah oo ay ku laafyoonayaan saddex hablood oo gambo yar ahi. Daaqaduhu way u deggen yihiin, hees baa ka bulaamaysa, gaadhiguna taayirka uunbuu rogayaa. Uma muuqdaan duul wax ka maqan yihiin…wax aan balaayo ahayn. Tartiib ayay ugu soo dhawaadeen xaawaleydii shareernayd.
-Naa waddada ka baydh maxaad isla weedhaaminaysaa? Gambo-yartii ayaa ku hiiftay shareeratadii.
Iyadu juuq uma odhan ee intay dhankaa isu ururisay ayay socodkeedii iska wadatay. Hakad yar oo ay fatooraddii ay wateen ku sameeyeen ka dib, way ka soo daba keynaaniyeen oo haddana hadallo hiif iyo haaraan ah u miiseen. Sidii oo kale ayay sidii wax dhego la’ iska sii dhuyaashay. Mar saddexaad iyo: Naa maad mirqaansan tahay dhillayahay…iyo tufoo candhuuf ah!
Si aan saxar ku jirin ayaan u maqlayaa una arkayaa hadallada iyo falkaba. Yaab! Cadhaan gawracmay oo dhiiggu i dhaqaaqay. Bal shaqaabadahaa kibraya day. Ma wax laysugu kibro oo la isugu xoog sheegto ayaynu haynnaa? Miyaanay meeshu Hargeysa ahayn oon salli xun oo dhinac walba ka guban lagu wada fadhiyin? Intii aan isu maqnaa ayay xafar boodh, quruurux iyo siigo wata nagu qaseen oo haadka si xawli ah u qabsadeen. Belaayo idin raacday. Adna walaaleey iska dul qaado oo Ilaahay ku dhaaf. Shareeratadii iyadu juuq may odhan. Sidii qof aan waxbaba lagu samayn!
Wax yar ka dib baskii ayaa soo maray, oon dhinaca kaga booday. Sidaannu huufta u haynnay ayaan soo gaadhnay ishaarada Madaxtooyada oo xidhan. Maxaa dhacay? Iyo shil baabuur ayaa ka dhacay! Bal sii. Mise wallaahi waaba tii yarayd oo si baas waddada badhtankeeda u hawaarta. Gambadii mee? Ma dirac bay xidhnayd mise garan? Mooyi? Oo waxan oo dhiig ahi muxuu ahaa iyo laba kale oo la socday ayaa afka goostay! Iyadu halkan buu cir iyo dhul toona qaadi la’yihiin oo dhulka isla dhacaysaa. Malaha way miyir doorsoontay oo maba oga waxa ay samaynayso.
Waxa la yidhi iyada oo afarta haadba maraysa ayuu mid kale oo ka daran oo bas gafuur weyn wataa jihada ka lumiyey, isagu waxba ma noqon ee wakaa deyrka madaxtooyada ka soo horjeeda afka kula jira. Iyaduse si walba way u balanbashay. Gaadhigii beri ayaa la wadan jirey ayay sheekadiisu noqotay, iyaduna waatan albaabka geerida garaacaysa ee weliba laga furi la’yahay.
Toban daqiiqo ma dhanna inta u dhaxaysay labadaa dhacdo. Intii ay dadka baska saarani taxliilinayeen dhacdada, anuu faq dheer oo cilmiga Alle iyo kala debberaaddiisa ah ayaan ku maqnaa. Subxaan Allaah…”Addoomahaygiiyow, anigu dulmiga waan iska xaaraantimeeyay idinkana dhexdiinna waan ka xaaraantimeeyey ee ha is dulmina…”
Waxaan maleeyay in aan ahaa qofka keli ah ee labadaa dhacdo isu xidhi karayey. Waxaanan ku ballan qaaday in aan meelo badan ka sheego.
Ilaahay waxa uu dhaafi waayey candhuuf af edeb daran ka soo baxday; ma u malaynaysaa in uu dhaafayo dhiig ay gacan gardarani daadisay? Ma u malaynaysaa in uu dhaafayo nafta isla weyn ee kumannaanka qof xaqooda ku tumatay? Ma filaysaa haddii la kala bursado in beledku badbaadayo? Somaliland waxa ku nool boqollaal mu’min oo qalbiga ka ooyaaya; iyo boqollaal kale oo ciil iyo cadho ku geeriyooday. Ilaahay mar mar degdeg ayuu uga jawaabaa…mar marna wuu u kaadiyaa si doqonku ugu kedsoomo. Dabadeed xilli aan la filayn ayuu sida sallida u duubaa.